N'agbanyeghị eziokwu na Apple emeghị hapụ niile iOS atụmatụ, ndị na e wepụtara ga-eme ka ọnụ gị mmiri. Dabara nke ọma n'ihi na ị, ọhụrụ iOS ga-elu ndị ọzọ na-arụ ọrụ a otutu mma karịa gara aga nsụgharị. Nke ahụ bụ na-atụ anya, ọ bụ Otú ọ dị ọtụtụ ihe ndị ọzọ akọ ka anyị banyere atụmatụ na ị na-hà ga-na iOS 9. The nkwaghari iOS atụmatụ na-enye ohere ọrụ ime ka mgba ọkụ si gam akporo ka iOS bụ otu n'ime ọtụtụ ụzọ ka akwagakwa iOS gị nile data. Nke a bụ ihe ngwọta dị mfe ọkọnọ site iOS 9 na ọtụtụ ọrụ na-ata ahụhụ site na. Ị ga-esi na-eme ka ngbanwe na gị niile foto, videos, ibe edokọbara, audio, akwụkwọ, na kọntaktị na ọbụna email na ozi akụkọ ihe mere eme.
Ma ihe banyere akwụkwọ ahụ aja, oleekwa ụfọdụ ihe ndị na akwụkwọ ahụ aja na ị nwere ike ibudata maka iOS 9?
Anyị butere ụzọ na-egosi gị ole na ole nke kasị mma dị iche iche na ihuenyo mkpebi otú i nwere ike họrọ onye na kasị mma suut gị na iPhone.
1. Oyiyi Skins 2
Oyiyi skins gị abụghị nkezi akwụkwọ ahụaja kama ihe ngwa na mejupụtara 42 nke kasị mma n'ụlọ ihuenyo nsio. Nke a pụtara na ị ga-ahọrọ si n'elu 42 akwụkwọ ahụ aja.
Ihuenyo Resolution- 960 x 640 retina mkpebi onye ọ bula nke 42 na akwụkwọ ahụ aja
2. adị n'Otu na akwụkwọ ahụ aja
A bụ ihe ọzọ iPhone ngwa na-enye gị ohere kpamkpam ịgbanwe ekwentị gị site na-agwụ ike ịrịba na n'elu 1000 nsio maka ụlọ gị na ihuenyo. Ọ na-abịa na ihe karịrị 450 na-egbukepụ egbukepụ mmetụta ịhọrọ site na.
Ihuenyo Mkpebi: ihuenyo mkpebi bụ iche iche dabere na akwụkwọ ahụaja ị na-ahọrọ
3. Ọhụrụ aka
Nke a akwụkwọ ahụaja ga atụgharị gị iPhone n'ime a nkịtị n'ogige shed nke bụ coolest ihe ebi.
Ihuenyo mkpebi: HD
4. The Ikebe akwụkwọ ahụaja maka Mac
N'ihi ọdịdị hụrụ n'anya, nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma na akwụkwọ ahụ aja na HD i nwere ike mgbe ọ bụla maka gị Mac.
Ihuenyo Resolution- dị iche iche mkpebi dị maka dị iche iche iOS ngwaọrụ gụnyere iPad Obere. N'ihi na Mac a akwụkwọ ahụaja dị na s 1366 x 768 na ihuenyo mkpebi.
5. ọnwa na Ocean akwụkwọ ahụ aja
Nke a bụ pụtara akwụkwọ ahụaja maka gị Mac desktọọpụ ga-eme ka gị na desktọọpụ anya ukwuu. Ọ bụkwa maka ndị dị iche iche iOS ngwaọrụ gụnyere iPhone.
Ihuenyo Mkpebi: 800 x 600 ka 2880x 1800
Na akwụkwọ ahụ aja Mac OS X El Capitan 10,11
Ntọhapụ nke El Capitan 10,11 bụ n'ihi na a ọnwa ole na ole. Ya atụmatụ niile bụ ọnụma na preview na-ekwe nkwa a usoro na ga chaị Mac ọrụ ruo ogologo oge na-abịa. El Capitan mere ka ndozi na ya ụzọ Yosemite gụnyere mgbakwunye Chakwasa ihie Wuru na search ngwá ọrụ na-bụ ugbu a yana idobe okirikiri nke ihu igwe, egwuregwu scores ndị ọzọ search results. Mission Control arụ ọrụ ka mma na El Capitan karịa ka ọ na Yosemite. Niile na ihe niile, na ndozi nwere aghụghọ kamakwa nnọọ nnukwu na a ụzọ.
Ebe a bụ ụfọdụ nke akwụkwọ ahụ aja na i nwere ike inwe maka El Capitan 10,11.
1. The ukara El Capitan akwụkwọ ahụ aja
Dị nnọọ ka ya ụzọ, El Capitan ga-abịa na ukara akwụkwọ ahụaja. Ọ bụ maka niile iOS ngwaọrụ gụnyere iPhone.
Ihuenyo resolution- 5120 X 3200 ma ọ bụ 2800 x 1800
2. Ultimate Abstract akwụkwọ ahụ aja
Ọ bụrụ na nkịtị nkà bụ gị ihe, nke a bụ otu nke kasị mma na akwụkwọ ahụ aja na ị na-aga ịhụ maka gị Mac desktọọpụ.
Ihuenyo resolution- 1600 X 1200, 1400 X 1050 na 1280 X 960
N'ebe na-adịghị nnọọ ọtụtụ ụdị nke akwụkwọ ahụaja na-kpọmkwem haziri maka El Capitan 10,11 ọ bụ ezie na anyị na-eme olileanya na kwere na nke a ga-agbanwe nnọọ anya. Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọtụtụ n'ime ndị na akwụkwọ ahụ aja na anyị depụtara n'elu ga-arụ ọrụ maka nnọọ ihe ọ bụla iOS ngwaọrụ na niile nsụgharị nke iOS. Ihe ọ bụla ị na-ahọrọ, anyị na-atụ ị na-ahụ onye na-complements àgwà gị na otú ị chọrọ ka gị Mac ma ọ bụ ndị ọzọ iOS ngwaọrụ anya.
Olee otú iji tọghata M4V on Mac iji Mac M4V Ntụgharị (El Capitan gụnyere)
> Resource> Mac> Official iOS 9 & OS X El Capitan akwụkwọ ahụaja maka iPhone, iPad na Mac